လူပျိုကြီး သာ ပြောတယ် – Hlataw.com
မနက် မိုးလင်းသည်နှင့် ကားဒရိုက်ဘာ လူပျိုကြီး ကိုကျော်စိန်က ရောက်နှင့်နေပြီး နွယ်နီ နှင့် နွယ်နီ အန်တီ မာလာခိုင်တို့ တူဝရီးကို ဈေးသို့ ပို့ပေးရသည်..။ ဈေးတွင် စားသောက်ဝယ်ခြမ်းပြီး ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူ နွယ်နီအား ကျူရှင်သို့ ဝင်ပို့ခဲ့ပြီး မာလာခိုင်ကို အိမ်သို့ပြန်ပို့ပေးရသည်..။ နွယ်နီအဖေက သူမရှိတုန်း တာဝန်များကျေပွန်စွာလုပ်ရန်သေချာမှာသွားသည်။ ကားပေါ်မှ နွယ်နီ ဆင်းသွားသည်နှင့် မာလာခိုင်တစ်ယောက် ရှေ့ခန်းသို့ ပြောင်း၍ ထိုင်သည်..။ မွှေးကြိုင်သော ရနံ့လေးများက ကိုကျော်စိန်အား တိုက်ရိုက်ထိတွေ့လာသည်..။ မာလာခိုင်၏ တောင့်တင်းတုတ်ခိုင်သော ပေါင်တန်ကြီးများက လုံးတစ်နေပြီး ၊ အင်္ကျီထဲမှ တိုးထွက်တော့မယောင် နို့အုံကြီးများက ကိုကျော်စိန်၏ မျက်စိရှေ့ဝယ် အလှပြနေသလို ဖြစ်နေသည်..။ စကားမရှိ စကားရှာ၍ ပြောရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် စိုက်စိုက်ကြည့်လိုက်သော မာလာခိုင်၏ မျက်လုံးရွဲကြီးများက ကိုကျော်စိန်တစ်ယောက် ဘရိတ်ကို နင်းလိုက်မိသည်အထိ စိတ်တွေ ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်စေသည်..။အိမ်ပြန်အရောက် ကားကို ခြံဝင်းထဲ ကွေ့ဝင်လိုက်တော့ ပန်းရံများ ရောက်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ ကားဝင်လာတာ မြင်ရသည်နှင့် ခင်အေးက ပေါ်တီကို အောက်သို့ ခပ်သုတ်သုတ် ထလာသည်..။ ကားရပ်လိုက်သည်နှင့် မာလာခိုင်က ဈေးခြင်းတောင်း ဆွဲ၍ ကားပေါ်မှ ဆင်းကာ အိမ်သော့ကို ဖွင့် ဝင်သွားသည်..။
မာလာခိုင်က အဝတ်လဲတာ အိပ်ခန်းထဲတွင် မဟုတ်ပဲ မီးဖိုထဲတွင် ဖြစ်နေသည်ကို ကိုကျော်စိန် မစဉ်းစားတတ်…။ လက်တစ်ကမ်း အကွာတွင် မြင်တွေ့နေရသော မာလာခိုင်၏ ရင်သားအိအိများ အလှတွင်သာ စွဲငြိနေသည်..။ ဗြုံးခနဲ ကိုကျော်စိန်ကို တွေ့လိုက်ရ၍ အံအားသင့်သွားလို့လား မပြောတတ်..။ ထမီကို ခုချိန်ထိ ရင်လျား မဝတ်သေး..။ နှစ်ယောက်သား မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်၍ ကြောင်ကြည့်နေပြီးမှ မာလာခိုင်က မျက်လွှာချကာ ထမီကို ဝတ်ရန် ဖြန့်လိုက်သည်..။ အောက်ဖက်ကို လျှောကျသွားသော ထမီ အပေါ်နားစက နို့နှစ်လုံး လှစ်ဟပြလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်.. “ အို….အာ့….မလုပ်နဲ့….မလုပ်နဲ့……အား….ကို….ကိုကျော်စိန်ကြီးနော်…အိုအို…မလုပ်နဲ့…နော် မလုပ်နဲ့…လို့..” အိမ်တွင် သူတို့နှစ်ယောက်ထဲသာ ရှိသည်ဟူသော အသိနှင့် မာလာခိုင်၏ အကျင့်စရိုက်ကို သိထားသော ကိုကျော်စိန်က မာလာခိုင်၏ ခါးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် အားယူဆွဲပွေ့ရင်း နို့တစ်ဖက်ကို ငုံ့၍ စုပ်လိုက်သည်..။ ရင်ဘတ်လေး ကော့တက်သွားသော မာလာခိုင်က အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့ဖြင့် နှုတ်မှ တားနေသော်လည်း ကိုကျော်စိန်က အရေးမစိုက်တော့ပါ..။ မာလာခိုင်ကလည်း အသည်းအသန် ရုန်းကန်ခြင်း မပြု..။ ကျန်နို့တစ်ဖက်အား ကိုကျော်စိန်က လက်ဖြင့် ညှစ်၍ နယ်သည်..။ တင်းနေသော နို့အုံလုံးလုံးကြီးတွေက ကိုင်ရတာ အရသာ တွေ့လှသည်..။ ထမီစကို ကိုင်ထားသော သူမလက်နှစ်ဖက်က တဖြည်းဖြည်း အောက်ဖက်သို့ နိမ့်ဆင်းလာသည်..။
“ အိုရှင်….တော်ပါတော့….တော်ပြီ…ကျမကို လွှတ်ပါ….တော့….ရှင်….” မျက်နှာလေး မော့ရင် ပြောနေသော မာလာခိုင်၏ မျက်နှာလေးမှာ ပြုံးယောင်သမ်းရင်း နီမြန်းနေသည်ကိုတော့ ကိုကျော်စိန် မမြင်..။ နို့ကိုသာ သဲကြီးမဲကြီး စို့နေသည်..။ တစ်လုံးပြီးတော့ နောက်တစ်လုံးကို ပြောင်း၍ စို့ပြန်သည်..။ “ အို…..မလုပ်နဲ့…..တော်ပါတော့…ဆို….ဟင့်…ကျွတ်….အ………အား….” မတ်တတ်ရပ်နေသော မာလာခိုင်၏ ဒူးဆစ်လေးများ တဆတ်ဆတ် တုန်လာသည်..။ ညွှတ်၍ ကျချင်လာသည်..။ လူပျိုကြီးသာ ပြောရတယ်…၊ နို့စို့တာက ပညာသားပါလှသည်..။ နို့သီးကို တအားငုံစုပ်ရင်း လျှာထိပ်နှင့် များ ကော်ကော်ထိုးလိုက်တာ မာလာခိုင် ရင်ခေါင်းထဲအထိ ကြပ်ကြပ်သွားရသည်..။ မျက်စေ့ကို စုံမှိတ်ထားသော မာလာခိုင်၏ လက်ထဲမှ ထမီစက လွတ်ကျချင်လာသည်..။ တဖြေးဖြေး လျှောကျသွားသော ထမီစကြောင့် လစ်ဟာသွားသော သူမ၏ ကျောပြင် ပြည့်ပြည့်လေးကို ခါးတွင် ဖက်ထားသည့် ကိုကျော်စိန်၏ လက်များက ရွေ့လျား လျှောတိုက်၍ ပွတ်သပ်ပေးသည်..။ ပျြွတ်ခနဲ မြည်သံနှင့် အတူ ကိုကျော်စိန်က နို့ကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ တပြိုင်နက်ထဲမှာပင် သူ၏ လက်များကိုလည်း မာလာခိုင်၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ဖယ်လိုက်သည်..။
အဟင်း…..ဆိုတဲ့ သက်ပြင်းချသံလေးကို ပြုလျက် မာလာခိုင်တစ်ယောက် ထမီ စွန်တောင်ဆွဲလျက်သား အိပ်ခန်းထဲ ပြေးဝင်သွားသည်..။ သူမ၏ နောက်ကျောမှ လျှောကျနေသော ထမီက အိပ်ခန်းထဲသို့ ခပ်သွက်သွက် ပြေးဝင်သွားသော မာလာခိုင်၏ တသိမ့်သိမ့် တုန်ခါသွားသည့် တင်သားအိအိကြီးများကို အတိုင်းသားနီးပါး လှစ်ဖော်၍ နေသည် သူမ၏ နောက်ဖက်မှ ကိုကျော်စိန် လိုက်လာသည်..။ အိပ်ခန်းထဲ အရောက် မာလာခိုင်က ကုတင်ပေါ်က အိပ်ယာထက်သို့ သူမ၏ ကိုယ်လုံးကို ဝုန်းခနဲ ပင် လှဲ၍ အချ အနားသို့ ရောက်လာသော ကိုကျော်စိန်က သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်ကို ငုံ့၍ ဖက်ရင်း ကုတင်စောင်းသို့ ဒူးထောက်ကာ တက်လိုက်သည်..။ မာလာခိုင် ဘာစကားမှ မဆိုတော့…၊ မျက်လုံးတွေကို စုံမှိတ်ထားရင်း မျက်လုံးများ အပေါ်၌ သူမ၏ လက်ဖျံတစ်ဖက်ကို ကန့်လန့်ဖြတ်၍ တင်ထားလိုက်သည်..။ တရှူရှူး တရှဲရှဲဖြင့် အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းထန်နေသော ကိုကျော်စိန်က သူမ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲထောင်၍ ထမီကို ခါးသို့ လှန်တင်လိုက်သည်..။ မာလာခိုင်၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ရှိသော တစ်ထည်တည်းသော ထမီလေးမှာ ခါးနှင့် ဝမ်းဗိုက်ပေါ်တွင် ပုံလျက်သား …။ သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဖွေးဖွေးနု၍ တင်းရင်း ဝင်းမွှတ်နေသည်..။ ကိုကျော်စိန်က ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး တံတွေးကို တစ်ချက်မျိုချရင်း ပုဆိုးကို ဖြေချလိုက်သည်..။တန်းမတ်နေသော လီးတန်ကြီးက ထိပ်ကြီးနီရဲကာ တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်..။ တင်ထားသော လက်အောက်မှ မျက်လုံးကို ခပ်မှေးမှေးလေး ဖွင့်ကာ ကြည့်နေသော မာလာခိုင် စအိုလေးကိုပင် တစ်ချက် ရှုံ့လိုက်မိသည်..။ လီးထိပ်ဝလေးမှ အရည်ကြည်လေးတွေပင် စိမ့်၍ ထွက်နေသည်..။ ကိုကျော်စိန်က သူမ၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကိုင်၍ ဒူးထောက်လျက် ရှေ့သို့ တိုးလိုက်သည်..။ မာလာခိုင် ခိုးကြည့်နေသော မျက်လုံးများကို ပြန်၍ မှိတ်ချလိုက်သည်..။
“ ကိုကျော်စိန်…ကိုကျော်စိန်…..ဗျို့….ကိုကျော်စိန်…..” အိမ်ရှေ့မှ ခေါ်လိုက်သော ခင်အေး၏ အသံ..။ နှစ်ယောက်စလုံး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားကြသည်..။ “ ကိုကျော်စိန်…ကိုကျော်စိန်….” ခေါ်သံက ဧည့်ခန်းထဲသို့ပင် ရောက်၍ လာသည်..။ ကိုကျော်စိန် ကမန်းကတန်း ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းကာ ပုဆိုးကို ပြင်ဝတ်ရင်း အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လိုက်သည်..။ ထိုအခိုက် မာလာခိုင်၏ ထံမှ တောက်ခေါက်လိုက်သံကိုတော့ ရှေ့သို့ အာရုံရောက်နေသော ကိုကျော်စိန် မကြားလိုက်ရပေ..။ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ရပ်နေသော ခင်အေးနှင့် ကိုကျော်စိန် မျက်နှာချင်း ဆိုင်မိသည်..။ “ ဘာလဲ…..ကိုခင်အေး…ဒီမှာ အိမ်သာတက်နေတာ…..” “ ဟဲ…….ဟဲ ကိုကျော်စိန်ကို ကြည့်၍ ခင်အေး ရယ်လိုက်သည်..။ ပြီးမှ…. “ ဘိလပ်မြေ မရောက်သေးဘူး…အဲဒါ ပေးပါဦး…..” “ ဟင်……” ခက်ပြီ….ဘိလပ်မြေဆိုင်၏ ဖုန်းနံပါတ်အား ကိုကျော်စိန် မသိ..၊ နွယ်နီလှိုင်သာ သိသည်..။ ဆိုင်သို့ ကားဖြင့် အရောက်သွား၍ ပြောရုံသာ ရှိသည်..။ ပုဆိုးထဲမှ လီးကလည်း တောင်နေတာမှ တဆတ်ဆတ် ခါနေသည်..။
ဘိလပ်မြေ မရောက်၍ ပန်းရံသမားများ ပြန်သွားရတာကို အစ်ကိုကြီး ပြန်လာ၍ သိသွားလျင် ကိုကျော်စိန် ဆက်၍ မတွေးတော့…။ လက်ပတ်နာရီကို မြှောက်၍ ကြည့်သည်..။ မနက် ၈ နာရီခွဲပြီ..။ ကိုကျော်စိန် ခေါင်းနပန်း ကြီးသွားသည်..။ ၉ နာရီခွဲကို နွယ်နီလှိုင်အား သွား၍ ခေါ်ရအုံးမည်..။ သူ မာလာခိုင်နှင့် တွေ့ဖို့ မလွယ်တော့..။ ဘိလပ်မြေဆိုင် ရောက်ပြီးသည်နှင့် ခုချက်ချင်း ပို့ရန်ပြော၍ နွယ်နီလှိုင်ကို တစ်ခါတည်း တန်း၍ သွားခေါ်ရန်သာ ရှိတော့သည်..။ “ ဟင်း………ခုပဲ ကျုပ်သွားလိုက်မယ်….” “ ဟဲ..ဟဲ……..” တဟဲဟဲ ရယ်၍ ရယ်ကြဲကြဲ လုပ်နေသော ခင်အေးကို နားမလည်နိုင်စွာဖြင့် တချက် ခေါင်းငဲ့၍ ကြည့်ပြီး နှစ်ယောက်သား အတူတူပင် အိမ်ထဲမှ ထွက်လာခဲ့သည်..။ မာလာခိုင်တစ်ယောက် သည်းမခံနိုင်လောက်အောင် စိတ်ညစ်သွားမိရသည်..။ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်သွားသော ကိုကျော်စိန်၏ ကျောပြင်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း တောက်တစ်ချက် ခေါက်လိုက်မိသည်..။ သူမ စိတ်ထဲမှာ အလိုးခံချင်သည့် စိတ်ဆန္ဒတွေက ထိန်းမရအောင် ဖြစ်ပေါ်လို့နေသည်..။ အတော်ပင် ခံစားရခက်နေသည်..။
မာကျောသော အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ထိုးထည့်ချင်နေသည်..။ အိပ်ယာထက်တွင် လူးလှိမ့်ရင်း ခါးတွင် ပတ်၍ ပုံနေသော ထမီကို စိတ်မရှည်စွာဖြင့် ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။ မာလာခိုင်၏ လက်တစ်ဖက်က ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ရောက်သွားပြီး စောက်ဖုတ်ကို စမ်းလိုက်သည်..။ အမွှေးထူထူဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးက နဲနဲနောနော မဟုတ်..။ အဆမတန် ခုံးထနေသည်..။ ရွှဲနစ်အောင် ထွက်နေသော စောက်ရည်များကိုလည်း စိုခနဲ စမ်းမိလိုက်သည်..။ လက်မထိပ်လေးနှင့် စောက်စေ့ကလေးကို ပွတ်ရင်း လက်ညှိုးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးထည့်ရန် ပြင်လိုက်သည်..။ ဒီလို လုပ်လို့မဖြစ်..။ အပျိုဖြစ်ကထဲက သူမ၏ စိတ်ဆန္ဒကို ဘယ်သောအခါမှ လက်ဖြင့် မဖြေဖျောက်ခဲ့…။ သိမ်းသွင်း၍ လီးအစစ်ဖြင့်သာ ဆန္ဒဖြည့်ခဲ့သည်ချည်း ဖြစ်သည်..။ မာလာခိုင် စောက်ဖုတ်ပေါ်မှ လက်ကို ဖယ်လိုက်ပြီး…သက်ပြင်းချလိုက်မိသည်..။ ထိုအခိုက် ပူနွေးမာကျောသော အရာတစ်ခုက သူမ၏ ပေါင်ရင်းဘေးဖက်သို့ လာ၍ ထိတွေ့သည်..။ ဖြတ်ခနဲ ဖြစ်သွားရင်း မာလာခိုင် မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်..။ “ ဟင်…ရှင်…….ရှင်…” မာလာခိုင် အံ့သြထိတ်လန့်စွာဖြင့် ထထိုင်မိမတတ် ဖြစ်သွားသည်..။ သူတွေ့လိုက်ရသည်က ကိုယ်လုံးတီးဖြင့် ပန်းရံဆရာ ခင်အေးပင် ဖြစ်သည်..။
အလုပ်ကြမ်း သမားပီပီ သန်မာကျစ်လျစ် ဖုထစ်သော ခင်အေး၏ အဝတ်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တွေ့လိုက်သော မာလာခိုင်အား တဒင်္ဂ ငြိမ်သက်သွားစေသည်..။ “ မင်းလေး…..သိပ်ပြီး အလိုးခံချင်နေတယ် မဟုတ်လား…မင်း မကြုံဖူးသေးတဲ့ အရသာမျိုး ခံစားရအောင် ကိုယ်လုပ်ပေးပါ့မယ်…၊ ကိုယ့်လီးကြီးကို ကြည့်ပါအုံး……” လူပုံနှင့် မလိုက်အောင် ငြင်သာသည့် စကားသံအဆုံး စိတ်ညှို့ခံထားရသူပမာ မာလာခိုင်၏ အကြည့်က ခင်အေး၏ လီးကြီးဆီသို့ ရောက်၍ သွားသည်..။ ပြူးနေသည့် ဂေါ်လီကြီး ငါးလုံး လီးပေါ်တွင် ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် နှစ်လုံး အောက်တွင် တစ်လုံး ၊ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် တလုံးစီ..။ ပြဲလန်တန်းမတ်နေသော လီးကြီးကို ခင်အေးက တဆတ်ဆတ် လုပ်ပြသည်..။ စိုက်ကြည့်နေသော မာလာခိုင်တစ်ယောက် ခါးလေးကော့တက်မတတ် စအိုဝကို ရှုံ့ရှုံ့သွင်းမိနေရင်း စောက်ရည်ကြည်တွေ ထပ်၍ စိမ့်ထွက်လာသည်..။ ခင်အေး ငုံ့၍ မာလာခိုင်၏ ကိုယ်လုံးကို ပွေ့၍ မယူလိုက်သည်..။ ခင်အေး လက်ထဲ စွေ့ခနဲ ပါသွားသော မာလာခိုင်က ခင်အေး ကိုကြည်နူးစွာဖြင့် ရှက်ကိုးရှက်ကန်းလေး ကြည့်လိုက်သည်..။ မိန်းမများသည် သူတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာအား ယောက်ျားက နိုင်နိုင်နင်းနင်း ချီမပွေ့ယူတာကို ကြည်နူးလိုလားစွာ ခံချင်ကြသည်ချည်း ဖြစ်သည်..။ ခင်အေးက မာလာခိုင်အား ကုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ်၍ တင်လိုက်သည်..။ ကုတင်စောင်း လိုးနည်းဖြင့် လိုးတော့မည်ကို သိလိုက်သော မာလာခိုင်က သူမ၏ တင်သားကားကားကြီးကို ကုတင်စောင်းတွင် အသားကျအောင် ပြုပြင်နေရာယူရင်း ပေါင်နှစ်ချောင်း ကို ကားလိုက်သည်..။
သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို မက်မောစွာ ကြည့်ရင်း ခင်အေး ရှေ့သို့ တိုးလာကာ စိုရွှဲနေသော စောက်ပတ်ဝသို့ သူ့လီးဒစ်ကြီးကို မြုပ်အောင် ထိုး၍ အသွင်း မာလာခိုင်က တွဲလောင်းချထားသော ခြေနှစ်ချောင်းကို မယူ၍ ကုတင်စောင်းတွင် ဖနောင့်နှင့် နင်း ပေါင်ကိုကားကာ သူမ၏ တင်ပါးကြီးကို အစွမ်းကုန် ကော့၍ ကော့၍ အောက်မှ ပင့်ကာ ကော့ထိုးပစ်လိုက်သည် ပြွတ်….ဗြစ်……..ဖြစ်……..ပြွတ်……” “ အား……ဟင်း…” ခံချင်လွန်းနေသော မာလာခိုင်က အောက်မှ ကော့၍ ပင့်တင်ကာ ခြောက်ခါ ခုနစ်ခါလောက် လိုးလိုက်ပြီးတော့မှ တဒင်္ဂ စိတ်ကျေနပ်သွားပုံဖြင့် ခင်အေးကို မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်.။ ပြီးတော့ တစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပြီး သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကုတင်ဘေးတွင် မတ်တတ်ရပ်နေသော ခင်အေး၏ ခါးကို လှမ်းချိတ်ကာ ဆွဲယူလိုက်သည်..။ မာလာခိုင်က အောက်မှ ပင့်၍ လိုးအပြီး တင်ပါးကြီးကို မွေ့ယာပေါ်ပြန်၍ အချ တဝက်သာသာ ကျွတ်၍ ထွက်နေသော လီးကြီးကို ခင်အေးက မာလာခိုင် သူ့ကို ခြေထောက်ဖြင့် ချိတ်၍အဆွဲ လီးကိုပါ တပါတည်း လိုက်လိုးသွင်းသည်..။
“ အ…အ…..အ…အား….ဟင်း ဟင်း…..” မာလာခိုင် ရင်ဘတ်လေး ကော့ ခေါင်းလေးမော့၍ တက်သွားသည်..။ လီးကိုသွင်းတာက ဖြေးဖြေးလေး..။ ဒါပေမယ့် ဂေါ်လီငါးလုံး၏ ဒဏ်က မသေးလှ..။ ပြီး လီးကြီးကလည်း သံချောင်းကြီးအလား မာကျောလွန်းလှသည်..။ စောစောက ရမ္မက်ဇောကြောင့်သာ အာသာငမ်းငမ်း ဖြင့် ပင့်လိုးခဲ့ပေမယ့် အထိုက်အလျောက် ကျေနပ်သွားရသော်လည်း ခုလို ထိထိမိမိ မရှိလှ..။ အပျိုလည်း မဟုတ် ၊ ယောက်ျားတော်တော်များများနှင့် ကြုံခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်လင့်ကစား မာလာခိုင်မှာ အပျိုစင်လေးပမာ တစ်ကိုယ်လုံး အသားတွေ ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ် တုန်နေပြီး သွင်းလိုက်သော လီးက တဆုံးဝင်ရန် လက်နှစ်လုံးလောက်အလို ခင်အေးက အားဖြင့် ဆောင့်၍ တဆုံးသွင်းချလိုက်သည်..။ “ ဗြစ်…ဖွတ်…..အ…အမလေး….အ…..ဟင်းဟင်း….လုပ် လုပ်….ဆက်ဆောင့်..” လီးအပေါ်ဖက် အရင်းနားရှိ ဂေါ်လီကြီးက ထောင်တက်နေသော စောက်စေ့ကလေးကို အားဖြင့် ဆောင့်ကာ စောက်ပတ်အတွင်းနားသို့ ဖိသိပ်လိုက်သည်..။ ကော့ခနဲ ဖြစ်သွားရပြီး တစ်ကိုယ်လုံး လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်ကာ လက်ကလေးနှစ်ဖက်က ခင်အေး၏ လက်မောင်းတွေကို မမှီမကမ်း လှမ်း၍ ဆွဲဆုတ်လိုက်မိသည်..။
ဒီလို နုနယ်ချောမော လှပလွန်းသော မိန်းမမျိုးကို မလိုးဖူးသေးသော ခင်အေးကလည်း မညှာတော့ပါ…။ မာလာခိုင်၏ ဖွေးနုသော နို့နှစ်လုံးကို သူ့လက်ကြမ်းကြီးနှင့် ဆွဲကိုင် ဖျစ်ညှစ်၍ စိတ်ရှိတိုင်း ဆောင့်လိုးပါတော့သည်..။ “ ပြွတ်….ပလွတ်……..ဘွတ်….အား……အမလေး..အစ်ကိုရဲ့…အမလေး…လေး..ဟင်း…… ကောင်းလှချည်လား….နော်……အင်း တအားဆောင့်နေသည့်ကြားမှ အားမရနိုင်ဖြစ်လာရသော မာလာခိုင်က သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ခင်အေး၏ ခါးမှ ဖယ်၍ မိုးပေါ်သို့ထောင်လိုက်သည်..။ “ ပြွတ်…ဖွတ်…..ဟင်း…..အိ….အ……” မာလာခိုင်၏ ထောင်ထားသော ခြေနှစ်ဖက်က ရမ်းခါ၍ နေသည်..။ မာလာခိုင် မျက်လုံး မပွင့်တော့.။ ခင်အေး၏ ဆောင့်ချက်တွေက လျှော့မသွားသည့် အပြင် ပို၍ ပြင်းထန်သွက်လက်လာသည်..။ မကြာလှသော အချိန်တွင်တော့…… “ ပြွတ်……..ပလွတ်..ပြွတ်……..ဖွတ်……ဖတ်…..” “ အား…အ…….အမလေး..အို….အမလေး. ..လေး.အား…..ပြီး .ကောင်း……အင့်…” မာလာခိုင်၏ တင်သားကြီး ကုတင်စောင်းမှ လွတ်ထွက်သွားသည်အထိ ကော့၍ ကော့၍ တက်လာပြီး အရေတွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည်..။ ခင်အေးလည်း မကြာခင် ကိုကျော်စိန် ပြန်လာတော့မည် ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ နောက်ရက်တွေလည်း ရှိသေးတာပဲ ဟု တွေးကာ စိတ်ကိုလျှော့ကာ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်ရင်း ရှေ့သို့ငုံ့၍ မာလာခိုင်ကို ကြုံးပြီး ဖက်ထားလိုက်ပါတော့သည်..။
“ အန်တီလေး…..နေကောင်းရဲ့လား……” ငွေစက္ကူ တစ်ထပ်ကို ကိုင်၍ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာသော နွယ်နီက မီးဖိုခန်းဝင်ပေါက်နားတွင် ရပ်လျက် ခန္ဓာကိုယ် လေးပင်စွာဖြင့် မလှုပ်ချင်လှုပ်ချင် လှုပ်ရှား ချက်ပြုတ်နေသော မာလာခိုင်ကို မေးလိုက်သည်..။ “ ကောင်းပါတယ်….နွယ်နီရဲ့…ညက အိပ်ရေးပျက်လို့ နုံးနေလို့ပါ….” ဖြေမိဖြေရာ ဖြေလိုက်သည်..။ “ အင်း…” ရပ်နေရာမှ နွယ်နီ လှည့်ထွက်မည် အလုပ်…မာလာခိုင်၏ အသံက ထပ်၍ ထွက်ပေါ်လာပြန်သည် အော်…ဒါနဲ့……နွယ်နီ..ညကျရင် တို့မိန်းမသားနှစ်ယောက်ထဲ အဲဒါ ဦးကျော်စိန်ကြီးကို လာအိပ်ခိုင်းရင် ကောင်းမလားလို့….” “ ကောင်းသားပဲ…အန်တီလေးရဲ့…နွယ်နီ ပြောလိုက်ပါ့မယ်….” လှည့်ထွက်လာသော နွယ်နီ ဧည့်ခန်းထဲ အရောက် ဂျာနယ်ဖတ်နေသော ဦးကျော်စိန်ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။
“ ဦးလေး..“ “ ဟေ…..” “ ဒီမှာ…ပန်းရံဆရာကို ကြိုပေးထားဖို့ ငွေ သုံးသောင်း..” “ အော်……အေးအေး..သမီး….” ငွေကိုလှမ်းယူရင်း ကိုကျော်စိန်၏ မျက်လုံးအစုံက အိမ်နေရင်း စကပ်တိုလေးဖြင့် လှချင်တိုင်း လှနေသော နွယ်နီ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ခပ်ရဲရဲ ကြည့်လိုက်သည်..။ မနက်က မာလာခိုင်နှင့် အစပျိုးခဲ့သော ကိစ္စက ကိုကျော်စိန်အား အတော် ဒုက္ခ ပေးနေသည်..။ လီးက ကျတယ်ကို မရှိ…။ “ နောက်ပြီး…အန်တီလေးက ပြောတယ်….ဦးလေးကို ညကျရင် အိမ်မှာ လာအိပ်ပေးပါတဲ့…” “ အင်း….အိပ်ပေးမယ်……….” ကိုကျော်စိန် စိတ်ထဲ ပျော်သွားသည်..။ “ ဒါနဲ့…နွယ်နီ…မာလာခိုင်ကို ဦးလေး လိုက်ပို့ပေးရမှာလား….” “ ခါတိုင်းတော့….သူအိမ်ပြန်ရင် သူ့ဖာသာ မောင်းသွားတာပဲ…ညနေ သူပြန်လာမှ ကားကို ပြန်ယူလာမှာပေါ့…ပြီးတော့ နွယ်နီလဲ ဘယ်မှ သွားစရာ မရှိတော့ပါဘူး….” ကိုကျော်စိန် တစ်နေကုန် အားလပ်သွားပြီ…။ ပြောပြီးသည်နှင့် လှည့်ထွက်သွားသော နွယ်နီ စိတ်ထဲ…. “ ဒီနေ့….ဒီလူကြီး အကြည့်က ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး ဟုတွေးပြီး…နှုတ်ခမ်းလေး စူလိုက်မိသည်..။ ရေချိုး ထမင်းစားပြီး မာလာခိုင် ကားကိုယူ၍ သူမအိမ်သို့ ပြန်သွားချေပြီ..။ ဦးကျော်စိန်က အိမ်ရှေ့တိုက် ပန်းခြံအောက်တွင် ရှိသော ခုံတန်းလျားပေါ်၌ အိပ်နေသည်..။ အိပ်ယာပေါ် လှဲ၍ မဂ္ဂဇင်း ဖတ်နေသော နွယ်နီ တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းထံ ဖုန်းဆက်ရန်း သတိရသဖြင့် စာအုပ်ကို ပိတ်၍ ထထိုင်လိုက်သည်..။
ထိုအခါ အိမ်ဘေး ပန်းခြုံဘေးမှ လှုပ်ခနဲ တွေ့၍ လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်..။ “ အို……..” နွယ်နီ အသက်ရှူရပ်မလောက် ဖြစ်ရင်း မျက်လုံးလေး ဝိုင်းသွားရသည်..။ ပြီးတော့ မြင်ရသောအရာကို တစိုက်မတ်မတ် ကြည့်ရင်း ဖြေးညှင်းစွာ ထ၍ မှန်တံခါးများ ပိတ်ထားသည့် ပြူတင်းပေါက်နားသို့ တိုးကပ်လာသည်..။ သူမ မြင်နေရသည်က ဧရာမ ယောက်ျားတန်ဆာကြီး ….၊ ထိပ်ကြီးက နီရဲ ပြဲလန်နေပြီး လီးကြီးအပေါ်ပတ်လည်တွင် အဖုအဖုကြီးတွေ သီးထနေသည်..။ လီးကြီးက သာမန်အနေအထား မဟုတ်ပဲ ထောင်မတ်နေတာမှ….ရှေ့တည့်တည့်သို့ တန်းတန်းကြီး….။ ကြည့်နေသော နွယ်နီ တစ်ကိုယ်လုံး နွမ်းနယ်သလိုဖြစ်လာပြီး တုန်တုန်ရင်ရင် ဖြစ်၍လာသည်..။ “ ကြည့်ရတာ…ဟို ခင်အေး ဆိုတဲ့ လူကြီးပဲ….တော်သေးတယ်…လူကြီးမျက်နှာက ပန်းရုံနဲ့ ကွယ်နေလို့ ငါ့ကို မမြင်ရဘူး…” ကြည့်ရင်း နွယ်နီ၏ မိန်းမအင်္ဂါလေးထဲမှ တစ်မျိုးတစ်မည် ခံစား၍ လာရလေသည်..။ “ ငါ…..ဘာဖြစ်တာလဲ မသိဘူး…” အရှက်တရား…၊ မိန်းမသား အိနြေ္ဒဖြင့် ဖိသိပ်ထားခဲ့သော သူမ၏ သွေးသားတို့က ကာမဆန္ဒတို့ တွန်းကန်ပွင့်ထွက်လာကြလေပြီ…။ ပြဲလန်၍ အစွမ်းကုန် တောင်မတ်နေသော လီးကြီးက အငြိမ်မနေ..၊ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ လှုပ်၍အသွား နွယ်နီ အသက်ရှူများပင် ကြပ်လာပြီး ရင်ထဲတွင် နင့်ခနဲ နင့်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားရသည်..။
“ စောစောက ငါအိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲပြီး စာဖတ်နေတုန်း ပေါင်ကိုထောင်ပြီး ချိတ်ထားသော့ စကပ်က ခါးပေါ် လန်ကျပြီး အောက်ပိုင်းမှာ ဘာမှ မရှိဘူး..၊ သူ…ငါ့ကို လာချောင်းကြည့်ပြီး ငါ့ဟာလေးကို တွေ့ပြီး ဒီလို ဖြစ်နေတာများလား အို….အို…..” နွယ်နီ သိမ့်သိမ့်တုန်သွားရပြန်သည်..။ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှလည်း ဘာတွေမှန်းမသိ… ညှစ်ထုတ်လိုက်မိသလို…။ နဂိုကမှ ပြဲနေသည့်လီးကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်၍ ထပ်ကာ ဖြဲချနေသည်..။ နွယ်နီ မနေနိုင်တော့..။ စကပ်လေးအောက်သို့ လက်လျှိုလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကလေးကို ကိုင်စမ်းလိုက်မိသည်..။ သူမက အိမ်မှာနေရင်းမို့ ဘာအောက်ခံကိုမှ မဝတ်တတ်…။ “ ဟင်….” သူမ စောက်ဖုတ်လေး တစ်ခုလုံး အံ့သြလောက်အောင် ခုံးထ မာကျောနေပြီး အရည်တွေကလည်း အတော်များများပင် စိုရွှဲနေအောင် ထွက်ကျနေသည်..။ အရည်တွေကလည်း လက်နဲ့ ထိမိလိုက်တော့ ချွဲကျိစေးထန်း နေသည်..။ လီးပြဲကြီးကို ကြည့်ရင်း စောက်ဖုတ်လေးကို လက်နှင့်ဖိဖိပြီး လေးငါးချက်လောက် ပွတ်တိုက်ပစ်လိုက်သည်..။ “ အို….အိုး….အမေ့……” အိုး……ကောင်းလှချည်လား…….၊ အရသာ ရှိလိုက်တာပါလား..။ စိတ်ထဲ နဲနဲ ကျေနပ်သွားသည်..။ “ ဟင်…ကျွတ်…..” ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေသော ဟိုလူကြီး ထိုင်နေရာမှ အထ သူမနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိပြီး လူကြီးက ပြုံးပြ၍ လှည့်ထွက်သွားသည်..။
“ ငါ့နှယ်…..နော်……သေသာ သေလိုက်ချင်တာပဲ…..” တစ်ကိုယ်လုံး ထူပူသွားသော နွယ်နီ တစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ်သို့ ဝုန်းခနဲ ပစ်လှဲချလိုက်မိလေတော့သည်..။ -မှောက်လျက် အိပ်နေလို့လဲ ခံစားချက် ဝေဒနာက မပျောက်..။ ပက်လက်လှန် အိပ်တော့လည်း ဝေဒနာက မထူခြား..။ နွယ်နီ စိတ်ညစ်မိသည်..။ တစ်ကိုယ်လုံး နေမထိ ထိုင်မသာဖြင့် စိတ်ထဲတွင် တစ်ခုခု လိုနေသလို ပင် ဖြစ်နေရသည်..။ စိတ်ကူးတစ်ခုရ၍ နွယ်နီ လှဲနေရာမှ ထ၍ သူမ၏ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာပြီး ဒက်ဒီတို့ အိပ်ခန်းကို ဖွင့်၍ ဝင်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ ဒက်ဒီ စားပွဲအံဆွဲများတွင် ဟိုရှာဒီရှာလုပ်ရင်း စီဒီခွေ တစ်ချပ်ကို ဆွဲယူ၍ စက်တွင်ထည့်ကာ ကြည့်လိုက်သည်..။ အခွေက အပြာကား .။ ဒီအခွေ ရှိတယ်ဆိုတာ အရင်က ဒက်ဒီတို့အခန်း ရှင်းပေးရင်း တွေ့လို့ စမ်းကြည့်ပြီးပြီ..။ ကောင်းလိုက်သည့် ဇာတ်ကား..။ ဇာတ်လမ်းလည်း ဆုံးရော နွယ်နီ စောက်ဖုတ်လေးလဲ ရွှဲနစ်လို့နေသည်.။ ပြီးတော့ ခံစားနေရသည့် ဝေဒနာကလည်း မသက်သာသည့်အပြင် မီးလောင်ရာ လေပင့် ပိုလို့တောင် ဆိုးလာသည်..။ နွယ်နီ အခွေကို သူ့ နေရာသူ ပြန်ထားရင်း စားပွဲပေါ်တွင် ဝီစကီ ပုလင်း ရေသန့်ဗူးနှင့် ဖန်ခွက်တို့ အဆင်သင့် တွေ့လိုက်သည်..။ မူးမူး နှင့် အိပ်ပျော်သွားရင် ကောင်းမည်ဟု တွေးမိကာ ဝီစကီ နှစ်ပက်နီးနီး လောက်ထည့်၍ ရေနှင့် ရောပြီး သောက်ပစ်လိုက်သည်..။ နွယ်နီ အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ရောက်တော့ အူရိုင်းလေး ဖြစ်၍ အရက်ရှိန် အတော်တက်လာသည်..။
သူမ ကိုယ်ပေါ်ရှိ အဝတ်အစား အားလုံးကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ သူမ၏ ဗလာကျင်းနေသော ကိုယ်လုံးကို မှန်ရှေ့တွင် လှည့်ပတ်ကြည့်ရင်း ပေါင်လေးနှစ်ဖက်ကို ကွ၍ ကားပြီး ငုံ့ကြည့်လိုက်မိသည်..။ အို….သူမ စောက်ဖုတ်လေးမှ အရည်လေးတွေ အောက်သို့ အမျှင်လေးတွေတန်းကာ တွဲလောင်းလေး ထွက်ကျလာသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ သူမ ဆူဝေနေသော သွေးသားဆန္ဒကို ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရတော့ပါ..။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်ခုကို လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ဖိ၍ ဟလိုက်သည်..။ နီရဲနေသော စောက်ခေါင်းဝလေးတွင် မန်ကျည်းစေ့လောက်ရှိသော စောက်စေ့ကလေးက ထိုးထိုးထောင်ထောင်လေး ဖြစ်နေသည်ကို မှန်ထဲတွင် အတိုင်းသား တွေ့မြင်လိုက်ရသည်..။ ထိုခဏတွင် နွယ်နီ၏ စိတ်အာရုံတွင် စောစောပိုင်းက သူမတွေ့မြင်ခဲ့ရသော လီးပြဲကြီးကို သတိရမိသွားပြီး မျက်လုံးလေး မှိတ်ကာ စိတ်မှန်းဖြင့် လီးကြီးကို မြင်ယောင်ကာ စောက်ပတ်ဝလေးကို လက်ချောင်းထိပ်လေးများဖြင့် လှည့်ပွတ်ပေးနေမိသည်..။ အို….အရသာ….ရှိလှပေမယ့်…..အားမရချင်…။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ….။ နွယ်နီ မှန်ရှေ့မှ လှည့်ထွက်ခဲ့ပြီး ကုတင်စောင်းတွင် ထိုင်လိုက်သည်…။ နွယ်နီသည် နဂိုက ထကြွနေသော ရမ္မက်စိတ်ကို လက်ဖြင့် ဖြေဖျောက်ရင်း အပြာကားကို ကြည့်ခဲ့ပြီး အရက်ကိုပါ သောက်လိုက်မိလေတော့ သူမ၏ ရာဂစိတ်တွေက အဆမတန်ပင် ထကြွလာရုံမက အရှက်တရားပင် မရှိတော့သလောက် နီးနီး ဖြစ်လို့နေပါပြီ..။ “ ဟင်း…ဟင်း..အင့်….အင်း….” ပွတ်ရင်း စောက်စေ့ကလေးကို ထိမိတော့ ကျင်ဆိမ့်တက်သွားသည်..။ ဒီတော့ စောက်စေ့ကို ဖိ၍ ပွတ်သည်..။
စောက်ခေါင်းထဲကို တစုံတခု ထိုးထည့်ချင်သော စိတ်တွေကလည်း ပြင်းပြထက်သန်လို့ လာရသည်..။ မှိတ်ထားသော မျက်လုံးထဲတွင်တော့ သူမတွေ့ခဲ့သည့် လီးကြီးကို အာရုံ မပြတ်ပေ..။ “ အင်း..ဟင်း..ဟင်း…..ရှီး……အ….” “ ကျွီ..” အိပ်ခန်းတံခါး ပွင့်သွားသံ ကြားသဖြင့် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အထဲကို လှမ်းဝင်လာသော ကိုကျော်စိန်ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ တစ်နေ့လုံး မငြိမ်းနိုင်တဲ့မီး အရက်ပါ ထပ်သောက်လာလိုက်တော့ ကိုကျော်စိန်တစ်ယောက် ရဲဝံ့၍ နေပါပြီ..။ အိပ်ခန်းထဲမှ ငြီးသံ သဲ့သဲ့ ကြားရ၍ တံခါးကို ဟကြည့်လိုက်ရာ နွယ်နီတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတာ တွေ့လိုက်ရတော့ ကိုကျော်စိန် ချက်ချင်းပင် အခန်းထဲသို့ လှစ်ခနဲ ဝင်လာခဲ့လိုက်တော့သည်..။ “ ဟင်…….ဦးလေး…….” နွယ်နီ မျက်လုံးလေးတွေ ဝိုင်းသွားရစဉ် ကိုကျော်စိန်က အခန်းထဲ အရောက် မတ်တတ်ရပ်၍ ပုဆိုးကို ချွတ်ချပစ်လိုက်သည်..။ “ အို….” တန်းမတ်နေသော အကြောပြိုင်းပြိုင်းဖြင့် လီးတန်မဲမဲကြီးက ပြဲလန်၍တော့ မနေ ..။ စောစောက လီးကြီးထက်တော့ ကြီးသည်..။ ရှည်သည်..။ ကိုကျော်စိန်က အသားဖြူပေမယ့် လီးကြီးက မဲမဲကြီး..။ ကိုကျော်စိန် ရှေ့သို့ လှမ်းလိုက်ရင်း သူ့အင်္ကျီကိုပါ ဆွဲချွတ်လိုက်သည်..။
ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားပေပြီ..။ နွယ်နီ လူးလဲထလိုက်ပြီး သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးလေးကို ကုတင်စောင်းတွင် ဒူးထောက်၍ ထိုင်လိုက်သည်..။ ရှေ့သို့ လှမ်းလာသော ကိုကျော်စိန် သူမနှင့် လက်တစ်ကမ်း အကွာသို့ ရောက်လာသည်..။ “ နေ…နေအုံး…..ဦးလေး…..” ကိုကျော်စိန် ရပ်လိုက်သည်..။ နွယ်နီက အိပ်ယာပေါ်တွင်ပင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်က နောက်သို့ ပြန်၍ ထောက်ကာ လီးကြီးကို ကြည့်ရင်း စောက်ပတ်ထဲ လက်ခလယ် ထိုးထည့်ကာ ကလိသည်..။ “ ဟို….ဦးလေးဟာ ကြီးကို….ဖြဲ…..ဖြဲလိုက်…..” ကိုကျော်စိန့်လီးက ထိပ်ဝပေါ်ရုံသာ ရှိသော လီးငုံမျိုး ဖြစ်သည်.။ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော လီးကို ကိုကျော်စိန်က လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိပ်ဖျားမှ အရည်ပြားကို ဒစ်ကြီးပေါ်အောင် ဆွဲလှန်ချလိုက်တော့ စိုက်ကြည့်နေသော နွယ်နီ၏ လက်ခလယ်က စောက်ပတ်ထဲသို့ ပို၍ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြင့် အသွင်းအထုတ် လုပ်လာသည်..။
“ အင်း…ဟင်း…….အင့်….အင်း” အနီးကပ် တွေ့နေရသော ကိုကျော်စိန် မနေနိုင်တော့ နွယ်နီလေး…..သမီး စောက်ပတ်လေးထဲ ဦးလေး လီးကြီး ထည့်လိုက်ရင် ဒီထက် ပိုကောင်းမှာ ..သမီးရဲ့.” “ ထည့်….ထည့်လေ….လာ..လာ….” နွယ်နီက လက်တစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်းဆွဲခေါ်သည်..။ ရှေ့သို့ တိုးကပ်လာပြီး ကိုကျော်စိန်က ကုတင်ပေါ်မှ နွယ်နီကို ကုတင်စောင်းတွင် ကန့်လန့်ဖြတ် လှဲစေပြီး သူမ၏ ခြေနှစ်ချောင်းကို သူ့ပုခုံးတဖက်စီ တွင်တင်ကာ လီးထိပ်ကို စိုရွှဲနေသော စောက်ပတ်အဝတွင် တေ့ကပ်လိုက်သည်..။ “ သွင်း……သွင်း တော့ လေ……” “ ဗြစ်….ဗြစ်……ဖွတ်……အီး…အား…..အမေ့….အီး….” စိတ်မထိန်းနိုင်တော့သော ကိုကျော်စိန်က လီးကို အဆုံးဝင်အောင် တစ်ချက်တည်းဆောင့်၍ သွင်းချလိုက်သည်..။ နွယ်နီတစ်ယောက် ကော့တက်သွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် တုန်နေရှာသည်..။ ကိုကျော်စိန် ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်..။ မဆန့်မပြဲဖြင့် လီးကြီးတဆုံးဝင်နေသော စောက်ပတ်လေး အဝမှ သွေးစီးကြောင်းလေး တွေ့လိုက်ရသည်..။ လက်လှမ်း၍ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ချေပေးလိုက်သည်..။
“ လုပ်…..လုပ်လေ…ဦးလေးရ…..အ..အမလေး..လေး….” “ နွယ်နီလေး….အင်း..ကောင်းလား..” သွေးထွက်နေမှန်း သိ၍ နာကျင်မှု သက်သာအောင် အဆောင့်ရပ်ပြီး နို့တွေကို ကလိပေးနေရာမှ မေးလိုက်သည်.။အင်းဟင်း…..လုပ်….လုပ်..နာနာလေး…ကောင်းတယ်……..ဆောင့်ပေးပါ….အား… အင့်…..အမေ့…….တအားဆောင့်ပေးပါ…..” “ အ…အား…..ဆောင့်စမ်းပါ…ဦးလေးရဲ့ ..ဘာလဲ..အားမရှိဘူးလား….ကျွတ်…ကျွတ်….အင့်..ဟင့်…” ကိုကျော်စိန် သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို ဖိညှစ်ဆွဲကိုင်ပြီး အသားကုန် ဆောင့်လိုးပါတော့သည်..။ “ ဗြစ်……..ဘွတ်……ပလွတ်…….ဖွတ်…..ဗြစ်……အား…….အင်း……အင့်…အ..အမေ့ အား.အိ…..အ…..” နွယ်နီ ခါးလေး ကော့တက်ကာ ခေါင်လေး ဘယ်ညာရမ်းခါရင်း တစ်ချီ ပြီးသွားသည်..။ မပြီးသေးသော ကိုကျော်စိန်က အရှိန်ကို လျှော့၍ တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ပေးသည်..။ နွယ်နီ အာသာပြေသေးပုံမရ..။ စောက်ပတ်ထဲမှ တလှုပ်လှုပ် တရွရွဖြင့် သူ့လီးကြီးကို ဖျစ်ညှစ် ဆုပ်နယ်ပေးနေသလို ..။ တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ပေးနေရာမှ ခဏအကြာ နောက်တစ်ချီအတွက် အပြီးလိုးရန် အိုင်ထွန်းရွှဲနစ်နေပြီး ချော်ချွတ်ချွတ် ဖြစ်နေသော အရည်များကို သုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ ကိုကျော်စိန် လီးကြီးကို ဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်လိုက်သည်..။
“ အိုး….မထုတ်…..မထုတ်နဲ့လေ…လုပ်….လုပ်…လုပ်လေ… ဦးလေးကလဲ..ကျွတ်..ပြောလိုက်ရတာနော်…..ဟင့်ဟင့်…..” “ လိုးပါ့မယ်..နွယ်နီရဲ့…တော်ကြာ နွယ်နီလေးကသာ နာတယ် တော်ပြီ မပြောနဲ့…” “ အံမာ….ဦးလေးကလား…နွယ်နီ ခံနိုင်အောင် ခံမယ်….စိန်လိုက်..လေ….ဦးလေး တစ်ညလုံး လိုးပေးမလား..ဦးလေး အားကုန်သာ လုပ်…ကွဲချင် ကွဲသွားပလေ့စေ…ဦးလေးဟာကြီးသာ မထုတ်ပစ်နဲ့….နွယ်နီ အောင့်ပြီး ခံနိုင်အောင် ခံမယ်…..” နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ပြုံးလိုက်ကြကာ ဒစ်ပေါ်သည်အထိ အပြင်သို့ရောက်နေသော လီးကြီးကို ဗြစ်ခနဲ တဆုံး ဆောင့်သွင်းလိုက်တော့ နွယ်နီလေးမှာ အင့်ခနဲ အသံလေးထွက်ကာ ဟင်းခနဲ သက်ပြင်းလေးချ၍ မျက်လုံးလေး နှစ်လုံးကို မှိတ်ချလိုက်ပါလေတော့သတည်း….။ ပြီးပါပြီ
ကောင်း တာ ထက်တောင်ပိုသေးတယ်ရှင့်